Jurgen Klopp oo ka hadlay Sababta uu keydka u dhigay Daafaca Virgil van Dijk Kulanka Xalay ee Ac Milan | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Jurgen Klopp oo ka hadlay Sababta uu keydka u dhigay Daafaca Virgil...
Jurgen Klopp oo ka hadlay Sababta uu keydka u dhigay Daafaca Virgil van Dijk Kulanka Xalay ee Ac Milan
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa sharraxay inuu dib u dhigay Virgil van Dijk guushii Champions League ee ay ka gaareen AC Milan .
Klopp ayaa qirtay inuu wali u baahan yahay inuu ka taxadaro soo laabashada daafaca oo ka soo laabtay dhaawac jilibka ah oo muddo dheer ah.
Wuxuu yiri: “Runtii waa wax adag; Virgil van Dijk , qof walba oo arkay isagoo kululaanaya caawa malaha wuxuu u maleeyay,‘ Muxuu u ciyaarin? Laakiin waa inaan noqonnaa kuwo caqli gal ah daqiiqadahaan. Waxaan halkaan ku haynaa saddex xidig ee safka ugu dambeeya oo dhammaantood ka soo laabtay dhaawacyo muddo dheer jiray. , taas oo weyn.
“Kuwa kale ma ahayn isbaddallo waaweyn, haddii aad doonayso, Naby Keita ayaa durba ku soo bilowday laba ama saddex kulan xilli ciyaareedkan. Ma hubo, Hendo miyuu ku soo bilowday kulankii ugu dambeeyay? Fabinho waa inuu soo maro.
“ Divock Origi , dadku waxay ku iloobaan si dhaqso leh nolosha iyo kubbadda cagta, waa weeraryahan aad u fiican runtiina si fiican ayuu u fiicnaa caawa, gaar ahaan waqti dheer oo uusan ku soo bilaaban. mararka qaar noloshu waxoogaa raaxo la’aan ah. Laakiin isagu waa nin weyn runtiina waan ku faraxsanahay inuu caawa sidan u ciyaari karo. ”
Previous articleWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Liverpool oo ku biirtay Loolanka Robert Lewandowski, Heshiiska Bruno Fernandes oo lagu dhowyahay, iibinta Antonio Rudiger iyo Qodobo kale
Next articleMullah oo war kasoo saaray ‘khilaafka ka dhex qarxay’ Taalibaan